Yan Aung: ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်သို့ တမ်းတမိခိုက်....
ငယ်ငယ်တုန်းက ဦးရှင်ကြီးကပ်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ်ဗျ. မုန့်ဆမ်းစားရလို့လေ. ဟတ်ဟတ်.
စားလို့လည်းကောင်းသားနော်. အိမ်နီးချင်းတွေက လာဝေပါတယ်. ဦးရှင်ကြီးကပ်လို့ပါ ဘလာဘလာဘလာပေါ့.
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမသိဘူး. မနက်ခင်း မိုးလင်းလို့ မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီး အမေ့ကို ပြေးဖက်လို့ ဘာရှိလဲ မေးရင် အမေက ဦးရှင်ကြီးပွဲကိုပဲ မေးငေါ့ပြပါတော့တယ်.
ပြီးတော့ အမေ့ကို မေးပါသေးတယ်. ဦးရှင်ကြီးဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့.... မုန့်ဆမ်းနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲလို့ပေါ့...
မားသားကြီးက ဦးရှင်ကြီးဆိုတာ စောင်းတီးသိပ်ကောင်းတာ. ရေလမ်းခရီးနဲ့သွားရင်း မိန်းမလှကျွန်းနားအရောက် လှေသူကြီးလည်း ခဏနားဖို့ ဆုံးဖြတ်သတဲ့. Break time လေးမှာ မောင်ရှင်လည်း စောင်းတော်ကိုဆွဲလို့ အပျင်းပြေ လက်စွမ်းပြခိုက် မိန်းမလှကျွန်းရဲ့ အရှင်သခင် မယ်ခနဲ့ မယ်လှတို့ ဥစ္စာစောင့်မလေးနှစ်ယောက် ကြားမိသတဲ့.
သူစောင်းတီးတာကို ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေက ကြားပြီး နှစ်သက်လို့ မပြန်နိုင်အောင်လှေကြီးကို ၀ိုင်းဆွဲထားတာပေါ့. အဲဒါနဲ့ပဲ လှေသူကြီးလည်း something တော့ wrong ပြီ ဆိုပြီး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပါလေရော. အဲ. ဆောရီး မဲခွဲရောပေါ့ဗျာ.
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၃ ချီ ၃ ခါလုံး စောင်းသမားလေး မောင်ရှင်ပဲ မဲပေါက်ပါသတဲ့. (ဒါကြောင့်လည်း တစ်ခုခုကံမကောင်းရင် “ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောတတ်ကြတာလေ) နောက်ဆုံးတော့ စောင်းသမားလေး မောင်ရှင်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး ရေထဲကို ပစ်ချလိုက်ရာက ဦးရှင်ကြီးနတ်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါရောတဲ့...
ရေလမ်းခရီးသွားသူတိုင်း ဦးရှင်ကြီးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တတ်ကြတယ်လို့လည်း မားသားကြီးက ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောလိုက်ပါသေးတယ်. မုန့်ဆမ်းဘာလို့ ကျွေးလဲဆိုတာကိုတော့ သူလည်း မသိပါ. ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးလို့ မရခဲ့ပါ. သိသူများ ရှိရင် ပြောပေးပါဦး...
အံမယ်. ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဦးရှင်ကြီးတင်ချိန်ရောက်ရင် ဦးရှင်ကြီး တင်ပေးသူဆိုတာကလည်း လာဘ်လာဘ ကောင်းသားကလား. ဟိုက လာပါဦးခေါ်လိုက်၊ ဒီက ကြွပါဦးခေါ်လိုက်နဲ့ ပါးစပ်ကို မလည်ဘူး. (ဟုတ်တယ်လေ. သူက ပါးစပ်ကနေ ရွတ်ပေးရတာဆိုတော့ ပါးစပ်မလည်ဘူးပေါ့.)
ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက ဦးရှင်ကြီးရုပ်ရှင် တီဗွီကလွှင့်တာ ကြည့်ဖူးတယ်. ပြည်လှဖေ သရုပ်ဆောင်တာပေါ့. ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေကိုလည်း ပီပြင်အောင် ရိုက်ထားပါတယ်. ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် မင်းသမီးဝတ်စုံလေးတွေ ၀တ်လို့ လေထဲမှာ လွင့်နေပြီး ပြည်လှဖေ စောင်းတီးနေတာကို ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် လှည့်ကနေကြတာ. ကျွန်တော်တောင် ကြည့်နေရင်း ကြက်သီးထတယ်. တကယ် တကယ်..
ကြည့်ဦးလေ. ဒါရိုက်တာကလည်း ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေကို ပိုပြီးတော့ တူအောင် မျက်နှာနား အနီးကပ် ဆွဲရိုက်လိုက်၊ ရွှီးခနဲ အဝေးကို ထွက်သွားပုံကို ပြလိုက်၊ “ဟင်းဟင်းဟင်း” လို့ ရီသလို မောသလို လုပ်ပြလိုက်နဲ့ ကျွန်တော် ကြောက်တာပေါ့. အဲဒီ့ကတည်းက ကျွန်တော်လည်း သူများတွေကို လှန့်ချင် ခြောက်ချင်ရင် “ဟင်းဟင်းဟင်း” လို့ ရီတတ်လာရောဗျာ. ဟင်းဟင်းဟင်း....
နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း ဘဘကြီး ဦးနေ၀င်းက ရှေးကားတွေ၊ ဥစ္စာစောင့်တွေ၊ သရဲတစ္ဆေကားတွေဟာ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ယိုယွင်းပျက်ပြားစေတယ် ဆိုပြီး သကာလ ဆင်ဆာပိတ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မကြည့်ရတော့ပါဘူး. မြန်မာ့အသံမှာ အဲဒီ့ကားတွေ ရှိရင်တောင် ကံကောင်း.
ကဲပါလေ. လိုရင်းပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် youtube ကို ထုံးစံအတိုင်း မွှေနေခဲ့ရင်းက စောင်းသမားလေး မောင်ရှင်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဆိုထားတာလေး တွေ့တာနဲ့ ဒီပို့စ်လေး ရေးဖြစ်သွားတယ်ဗျ.
တဆက်တည်း စာဖတ်သူတွေကိုပဲ ဆက်မေးရဦးမယ်ဗျာ. ပုန်းမကြည်နတ်ဆိုတာရော ကြားဖူးလား. သူ့ရဲ့ ဘက်ဂရောင်း နည်းနည်းလောက်သိရင် ဝေမျှပေးပါဦး. လောလောဆယ်တော့ ခေတ်သစ် မော်ဒယ်လ်ဂဲလ် ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေနဲ့ စောင်းသမားလေး မောင်ရှင်ကို ရှုစားတော်မှုလိုက်ပါဦးဗျာ.... အဆိုတော်ကတော့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းလေးတွေ ဆိုတတ်တဲ့ သျှန်ထွဏ်း(မြန်မာစာ) ပါခင်ဗျာ.
စစချင်း တီးလုံးက ကောင်းတယ်. နတ်ဒိုးသံနဲ့တူတယ်. ကျွန်တော်တောင် ပုဆိုးစွန်တောင်ဆွဲပြီး ထကချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ အိမ်နေရင်း ၀တ်တဲ့ Prada Short Pant နဲ့ လဲဝတ်ထားရတယ်ဗျာ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
ဦးရှင်ကြီးဆိုတာ အမြဲတော့ ကြားကြားဖူးနေတယ်။ သူ့ရဲ့ နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကို အခုမှဘဲ သိတော့တယ်။ ဂလိုကိုး...
ပုန်းမကြည်နတ်ဆိုတာကို ဘက်ဂရောင်းတော့ ကောင်းကောင်းမသိဘူးဗျ...
ဒီ post ထဲမှာတော့ နည်းနည်းပါတယ်...
Google Reader ထဲက ဖတ်တာဆိုတော့ ကိုရန်အောင်ကို လာနှုတ်မဆက်ဖြစ်တာ...
နှစ်ယောက် တစ်ယောက် ပဲ ဗျ .. ဟဲ ဟဲ ... ကိုရန် ရေ .. အစီ အစဉ် ရှိလား ... ကျွန်တော် က တော့ လုံလောက်ပါပြီ ... :P
Hi,Ko Yan Aung, it's fun to read. Thanks for sharing although the song is not really what I like.
Anyway, there will be ppl who like this song so please continue to keep up with ur good work.
ကိုရန် ကနေမယ့်ပုံကိုတွေးမြင်မိပါသေး :P
ပုန်းမကြည်နတ်အကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ ရှေးဟောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကိုညီလင်းဆက်ဘလော့ဂ်ကနေ လင့်ခ်ရလို့ download ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ ရေးသားသူက “ဆရာကြီးဦးမြ“ ပါ။
ခုလိုမျိုး ကျွန်တော့်မေးခွန်းလေးကို ဂရုတစိုက် ၀င်ရောက်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုတောင်ငူသားနဲ့ မဇနိရေ...
ကော်မန့်ဝင်ပွားပေးသွားတဲ့ မသဉ္ဇာ၊ ကိုစိုးထက်၊ မဆွေဆွေနဲ့ ကိုမင်းကျန်စစ်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
တကယ်ပါ. ဦးရှင်ကြီးပွဲနဲ့ ဝေးခဲ့ရတာ ကြာပြီ. မုန့်ဆမ်းကိုလွမ်းတယ်...